प्रविधिहरू - शेन्जेन Feellife चिकित्सा इंक
FEELLiFE को सोल: मानव जगतले लागि Dosing को 3rd तरिका प्रदान
1 गर्नुभएको Surge® आवृत्ति रूपान्तरण Nebulization प्रौद्योगिकी
बुद्दिमानिपूर्वक आवृत्ति सास गर्न अनुकूल स्प्रे। स्प्रे दर र रकम गहिरो फोक्सो मा तरल को जम्मा दर वृद्धि गर्न, बिरामीको साँस आवृत्ति अनुसार समायोजित गर्न सकिन्छ। एक आवृत्ति रूपान्तरण nebulization पुरानो nebulization मोडमा तीन पटक बराबर छ।
2. स्व-सफाई प्रौद्योगिकी
जो जब शक्ति-मा स्वतः nebulizer टुक्रा फ्लश गर्न सक्नुहुन्छ उपकरण संग। चालू जब nebulizer सफाई स्वचालित मोड प्रवेश गर्नेछ, र दबाइ blockage को घटना कम गर्न, सुरुमा5सेकेन्ड मा एक ठूलो प्रभाव शक्ति संग अवशिष्ट दबाइ निकाल्न गर्ने शक्ति सनकी अप।
3. तापमान नियन्त्रण प्रेरणा र सुक्खा बलिरहेको रोकथाम प्रौद्योगिकी
तापमान नियन्त्रण प्रेरणा: एक NTC प्रेरणा nebulizer। Nebulizer जो दबाइ कप मा समाधान को तापमान पत्ता लगाउन सक्छ NTC thermistor छ, यो तापमान स्वतः तापमान 45 ℃ पुगेपछि, मुख्यतः तरल को गतिविधि रक्षा गर्न कम हुनेछ।
ड्राई बलिरहेको रोकथाम प्रविधि: तरल गोदाम मा समाधान निकास छ भने महसुस गर्न ताप घटता प्रयोग गरेर। को nebulizer बन्द-डाउन हुनेछ यो तरल गोदाम मा समाधान महसुस गर्दा ड्राई बलिरहेको नाश भइरहेको बाट nebulizer टुक्रा रक्षा गर्न, बाहिर चलान गरिएको छ।
4 लिथियम Titanate ब्याट्री संचालित प्रणाली
उच्च तापमान प्रतिरोध, विस्फोट-प्रमाण समारोह र उच्च सुरक्षा प्रदर्शन, शुल्क र छुट्टी 3000 चक्र पुग्न गर्न सक्छन्, सेवा जीवन माथि5वर्ष छ।
5 Mesh® Nebulizer टुकडा सामाग्री अनि लेजर Superfine कराटे प्रौद्योगिकी
टाइटेनियम मिश्र धातु nebulizer टुक्रा राम्रो biocompatibility संग, nebulization बनाउँछ सुरक्षित, जंग प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
लेजर छेदों 2.5um मा pore व्यास राख्छ ± 25%, गहिरो फोक्सो मा तरल को जम्मा दर वृद्धि गर्न, स्प्रे कणहरु थप नाजुक बनाउँछ दबाइ अवशोषण र प्रभावकारिता राम्रो बन्न बनाउँछ।